Quuska Treadmill- Mudane - Qingdao Fitmax
quuska lagu ordo
Aqua Bike- Mudane
Quuska Treadmill- Mudane
jir jirka ah ee la tegaan quuska sharafta leh laga sameeyey oo 316L ahama. Xamili waa integrally sameeyay iyo dusha sare waa electrolytically safeeyey in la kordhiyo waxqabadka ka hortagga iyo miridhku ku. Shaxda socda waa duubnaadaan kartaa dhaqdhaqaaq fudud iyo keydinta meel. Running mor si habsami leh saa'idka rogid iyo waxa uu siiyaa saamayn massage ah.
1. aragti: 1430x612x1470mm
2. Net Miisaanka: 42kg
3. Gross Miisaanka: 55kg
a) Meegaarka: ahama 316L, oo dhumucdiisuna waxay of tuubooyin bir ah: 1.5mm
b) Rollers & sita; 316L ahama
c) suumanka Orodka : nylon iyo Maro adag
5. daaweyn oogada: indha tiray, polish Electrolytic
6. damaanad: 1 sano
7. Xidhmada: laga keeno kartoonka jiingado, kartoonada lakabka double. Aragti: 870x640x460mm, 1340x680x170mm, laba kartoon per set, 54Sets / 1x20GP
ordo The quuska waxaa macmalay la tayo sare leh AISI316L ahama soo bandhigtay ilaalinta anti-miridhku si waafaqsan heerarka caalamiga ah. dusha sare ee badeecada isticmaalaa nadiifinayo electrolytic iyo anti daahan xoqe dammaanad qaadaya cimri dherer iyo quruxdiisa ee badeecada. Waxaa ku qalabeysan saa'idka ahama birta iyo rollers, nylon iyo Maro adag socda suumanka damaanad ku sii iyo xasiloonida halka socda.
Candho- kor u siidaysay dhulka qolku iyo rollers si uu u sameeyo dhaqdhaqaaqa si fudud. Daboolo baahida macaamiisha kala duwan oo siiyaan waayo-aragnimo isboorti raaxo loogu talagalay macaamiisha ee dhinacyo kala duwan.
ordo The quuska waxaa loo isticmaali karaa meelo kala duwan sida Hotels, halkay, barkadaha dabaasha, Caafimaadka iyo kooxaha taam, kooxaha Madadaalada, xarumaha caafimaadka, Home, Dugsiyada, kooxaha Sport iyo wixii la mid ah.
Taam Aqua waa nooc cusub oo ah jimicsi laylinta, waxay isu keentaa oo dhan fasalo jirdhiska biyaha. Taam Aqua xoojin kartaa hawlaha jir, kor wareegga dhiigga iyo Xeerarkii dheefshiidka, Dhanka kale loo yareeyo dhibaatada ay keento jimicsi. Taam Aqua waxaa la sameeyaa iyadoo accessories kala duwan (bike, ordo, tababaraha elliptical, iwm); waa cayaar xiiso leh.
Ordo The quuska abuuraa faa'iidooyinka hawl socodsiinta classic iyo dhigeysa stress ma ah saaraya laabatada ku, hagaajinaysaa dheelitirka jidhka iyo wareegga dhiigga. Aqua orodka sidoo kale waa a cross tababar heer sare ah ee dhammaan ciyaaraha iyo hab aad u wanaagsan in la qaban ama looga hortago dhaawaca. Biyaha orodka caawisaa ciyaaryahan ah oo dhaawac ah inuu ka soo kabsado oo aan laga badiyay heerka taam ahaanshihiisa uu.
Waxaa si gaar ah lagu tilmaamay, waayo, miisaanka oo yaraada, daaweynta osteoarthritis, daaweynta jidh ahaaneed, iyo dib dhaawac sinta, taam aqua, dadka waayeelka ah, cudurka rheumatic iyo jirdhiska guud.
Previous: Quuska Treadmill- Fashion
Anti-miridhku Steel Aqua lagu ordo
aqua lagu ordo
Fitness Dabaasha lagu ordo
Fitness lagu ordo Under Water
pool lagu ordo
Badda quuska lagu ordo
Quuska Aqua lagu ordo
Ordo quuska Waayo Sale
Walker lagu ordo
Biyaha lagu ordo
DAR: No.17,Yuehe Road,Konggang IndustrialPark,Liuting,Chengyang,Qingdao